Umthombo wendlela: Ukulandela umkhondo weDynamic kwiShishini lakho | Martech Zone
Umthombo wendlela: Ukulandela umkhondo weDynamic kwiShishini lakho
NgoLwesithathu, uDisemba 19, 2012 NgoLwesithathu, uDisemba 19, 2012 Douglas Karr
Sisebenza neenkampani ezininzi ezinkulu kwaye umceli mngeni oqhubekayo usoloko ukulandela umkhondo wokuba zikhokelela njani na kwishishini labo. Ngelixa amashishini kunye nabathengi bephanda kwaye befumana iinkampani ezininzi kwi-Intanethi, basayithatha ifowuni xa benqwenela ukwenza ishishini.
Ingxaki kukuba siye safumanisa ukuba phantse lonke uguquko lwethu lwalusenzeka kwi omnye udidi. Bebengena ibinzana elifanelekileyo, kodwa bekungalindelwanga ukulandelelwa. Amathuba okuba iyafana indawo yakho… kukho amawaka okanye amashumi amawaka okudibanisa amagama aphambili ukuqhuba ukugcwala. Isibini sabathengi bethu, ngamakhulu amawaka amagama aphambili!
Akukho zinombolo zefowuni zaneleyo zokulandela nganye yazo, kodwa zintsonkothile ukufakwa kwenombolo yefowuni enamandla iinkqubo zinokulandelela ngokuchanekileyo. Inani elisetiweyo leenombolo zefowuni linokusetwa kwaye liphinde lisetyenziswe kwakhona kwisiza kunye namagama aphambili. Yile nto ifezekisiweyo yinkqubo efana neSourceTrak evela kwi-IfbyPhone.
kunye ImvelaphiTrak, unokongeza ukwahlula okungafaniyo kwamagama aphambili kwaye utshintshe inamba yefowuni. Inkqubo emva koko ibhalisa umnxeba kwaye irekhode iqela lamagama aphambili angene kuwo umnxeba. Yinkqubo elula kakhulu ukuyisebenzisa enokunceda naliphi na ishishini ukuba liqonde ukuba zikhokelela phi.
tags: ukulandelela umnxebaukufakwa kwenombolo yefowuni enamandlaIfowuniUkulandela umkhondo wefowuniimvelaphi
Ukucwangciswa, Ukwabelana, Ukusebenzisana kunye nokuSasazwa koMsebenzi wokuYila
Ngo-2012 i-Intanethi kunye neeNdlela eziShukumayo